अब्बल वडाध्यक्षहरु, जो जनता बचाउन डाक्टर लिएर घरघर जान्छन् – sunpani.com
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा कोरोनाको महामारी रहेको छ । नगरका २३ वटै वडा कोरोनाको प्रकोपमा छ । यो संकटको घडीमा नेपालगञ्जका केही वडाध्यक्षले वास्तवमै जनप्रतिनिधिको ‘गुण’ देखाएका छन् । उनीहरुले आफूलाई अरु भन्दा ‘अब्बल’ सावित गरेका छन् ।
संकटको यो घडीमा आफ्नै ज्यानको जोखिम मोलेर जनताको सेवामा लाग्ने वडाध्यक्षहरु हुन्, वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल, १३ नम्बरका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह र १८ नम्बर वडाका अध्यक्ष दीपक बर्मा ।
परेको बेलामा साथ दिने नै अनन्तसम्म सम्झनामा रहिरहन्छन् । यी तीन वडाध्यक्षले कोरोनाबाट तड्पिएका जनताको मनमा छाप रहिरहने काम गरिरहेका छन् । यी वडाध्यक्षहरु कोरोना संक्रमित वडावासीको घरघरमा डाक्टर लिएर पुगिरहेका छन् । संक्रमित भएर घरमा बसेका बेलामा डाक्टर र औषधी लिएर वडाध्यक्ष आइपुग्दा कुन चाहि वडावासी खुशी नहोलान् र ?
अस्पतालमा बेडको अभाव भइरहेको छ । घरमै डाक्टर आएर जाँच गर्ने र औषधी दिने गरेपछि वडावासीमा खुशीयाली छाएको छ । यी वडाहरुले एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेका छन् । अक्सिजन चाहिने विरामीलाई ठाउँमा पु¥याएर त्यसको व्यवस्थापन गरेका छन् । एक्सरे गर्नुपर्नेलाई निशुल्क नै सेवा दिएका छन् ।
वडा नं. १३ का अध्यक्ष शाहले संक्रमित थपिएको म्यासेज आउने बित्तिकै स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यो घरमा पठाएर अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । रातदिन नै खट्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य चौकीमा बसेका छन् । वडाध्यक्ष शाह भन्नुहुन्छ, ‘हामीसँग तीन जना स्वास्थ्यकर्मी सधैं तयारी अवस्थामा रहन्छन् । उनीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमै बस्ने व्यवस्था मिलाएको छु । विरामी थपिएको म्यासेज आउने वित्तिकै उनीहरु त्यो घरमा जान्छन् र विरामीको अवस्था बुझ्छन् ।’
संक्रमितको अवस्था जटिल देखिदा डाक्टरको टोली लिएर वडाध्यक्ष शाह नै विरामीको घरमा पुग्छन् । डाक्टरले त्यही उपचार गर्छन् । अस्पताल लैजानु पर्नेलाई वडाध्यक्ष शाहले व्यवस्था मिलाउँछन् । मंगलबार एकजनालाई अक्सिजन चाहिने भएपछि उपमहानगरपालिकाले रामलिला मैदानस्थित सञ्चालन गरेको कोभिड वार्डमा पठाइएको वडाध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । वडाध्यक्ष शाहले विरामीलाई अस्पताल वा कोभिड वार्डमा लैजानका लागि एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै उत्कृष्ट कार्य वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल र १८ नम्बरका वडाध्यक्ष दीपक बर्माले गरिरहेका छन् । वडाध्यक्ष रिजालले डाक्टर र औषधी लिएर घरमै पुगेर सेवा दिइरहेको बताउनुभयो । वडाध्यक्ष बर्माले संक्रमितलाई चाहिने सबै सेवा निशुल्क दिइने बताउनुभयो ।
यी तीन वटा वडामध्येमा १ र १३ नम्बरमा डाक्टर पारस श्रेष्ठ र १८ नम्बरमा डाक्टर सुभाष योगीको टीम परिचालन रहेको छ ।
नेपालगञ्जका अन्य केही वडाले पनि यस्तो सक्रियता बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । १० र १४ नम्बर वडाले स्वास्थ्यकर्मी घरघरमा पठाइरहेको पाइएको छ । नेपालगञ्जका उपमेयर उमा थापामगरले वडा नम्बर ३ र ७ मा सेनिटाइजर गरेको जानकारी दिनुभयो ।